Nanomboka ny 13 desambra teny amin’ny foiben’ny OMDA (Office Malagasy du Droit d'Auteur) Faravohitra-Antananarivo, ny fandraisan'ireo artista zokiolona ny fisotroan-dronono telo volana faha-4. Miisa 151 eo izy ireo ankehitriny.
vendredi, 13 décembre 2019 19:26
Black Nadia: Tera-dahy
Nampahafantatra tao amin’ny pejiny facebook ilay vehivavy mpanakanto Malagasy, Black Nadia, fa teraka soa amantsara. Amin'ny hafaliana no nizarany ny vaovao. « Bradley » no anaran’ny zanany. Salama tsara izy mianaka.
Katroka androany 12 desambra ny mahafeno 37 taona an'i Andrihamahazo Joel Issoubaly, fantatra amin'ny anarana mpanakanto hoe Wawa izay antsoin'ny maro hoe "Le prince du Salegy". Teraka tao Nosy-be izy, zanaka mpandrafitra. Vao 11 taona izy no nanomboka niaraka tamin'ny tarika tao anaty fianakaviana "Star boys", mpitendry batterie izy tamin'izany. Feno 16 taona izy, dia lasa batteur tao amin'ny groupe Jaguar II, hatramin'ny taona 2003. Teo anelanelan'izay anefa izy, ny taona 2001, dia namoaka album "Eh Makoalahy". Ny faraparan'ny taona 2003 izy nanaomboka ny album "Sômasômahely", ary dia niakatra niazakazaka ny lazan'i Wawa. Ankehitriny dia efa any Europe i Wawa mitety ireo faritra betsaka Malagasy, toy ny any Belgique, ary ao France no hanao ny alim-pandihizana ny noely sy ny famaranana ny taona 2019.
Misokatra amin’ny fomba ofisialy, nanomboka androany 11 desambra 2019, ary hifarana amin’ny 01 febroary 2020, ny fisoratana anarana amin’ny fifaninanana « Rallye Mathématiques ». Eo amin’ny andiany faha-19 ny fifaninanana amin’ity. Eny anivon’ny DRENETP sy ny CISCO no fanaovana izany. Lasa 9 ireo Faritra mandray anjara amin’ity andiany ity, raha toa ka 6 hatramin’izay. Ireto avy ireo faritra sivy voakasika : Analamanga, Matsiatra Ambony, Atsimo Andrefana, DIANA, Atsinanana, Boeny, Vakinankaratra, Alaotra Mangoro ary Taolagnaro.
Notontosaina tetsy amin’ny tranom-bokimpirenena Anosy ny fampirantiana ny asa soratr’i Brench Mbolamasoandro Ka ny hevitra navoitra tamin’izany moa dia ny hoe ”Izao rehetra izao”, izay anehoana ireo sangan’asa maro samyihafa nodiavina tamin’izay lalan’ny sehatry ny kanto izay. Maro ireo sangan’asa izay nampirantiana tao, toy ny asa soratra, ny akanjo, ny hosodoko; anisan’ny mampivoatra ny fifaneraserana amin’ny olona ny asa soratra hoy ramatoa Brench Mbolamasoandro raha nanome ohatra izy ny hoe “olona izay tsy nifanerasera nandritry ny taona maro, kanefa dia nampihaon’ny asa soratra“, ary anisan’ny hery lehibe ny hetsika toy izao mba ahampafantarana ireo kanto rehetra aseho amin’ny olona mpankafy, ary sarotra ny lalana nodiavina vao mahavita hetsika anakiray.
Isaky ny roa taona ny « Fondation Air France » dia manome loka fankasitrahana ireo fikambanana mandray an-tanana ireo ankizy tsy salama, manana fahasembanana na tra-pahasahiranana lalina. Tamin’ity taona ity, dia mompera Pedro OPEKA sy ny « Akamasoa » no voasafidin’ny « Fondation Air France » nahazo fankasitrahana. Tao amin’ny mozea Musée quai Branly ao Parisy renivohitr’i Frantsa no natao ny lanonana nanoloran-dRtoa Anne Rigail, filohan’ny « Fondation Air France » ny loka tamin’ny mompera Pedro. Nanome voninahitra izany Rtoa Brigitte Macron, vadin’ny filoha frantsay Emmanuel Macron. Folo taona amin’ity 2019 izao ny « Fondation Air France ». 30 taona nandraisana an-tanana ireo olona sahirana sy nampivoatra ny fiainan’izy ireo kosa ny « Akamasoa » eny Andralanitra, naorin’ny mompera Pedro. (Jereo Sary Tohiny)
Nivory voalohany tetsy amin’ny foiben’ny Ofisy Malagasy momba ny zon’ny mpamorona na OMDA etsy Faravohitra, ireo mpikambana vaovao ao amin’ny Filankevi-pitantanana ny 26 novambra 2019. Nandritra izany no nahavoafidy an-dRazafiarison Francis Alexandre, solontenan’ny ministeran’ny serasera sy kolontsaina, ho filohan`ny Filankevi-pitantanan’ny OMDA. Telo taona no fe-potoana iasan’ny filohan`ny Filankevi-pitantanana. Tale jeneralin’ny kolontsaina Razafiarison Francis Alexandre. Francis Turbo no anarana maha mpanakanto ahafantaran’ny olona azy, indrindra eo amin’ny tontolon’ny hatsikana. (Jereo Sary Tohiny)
Nekena nandritra ny filankevitry ny governemanta omaly zoma 29 novambra 2019 ny hananganana Ivon-toeran’ny Sarimihetsika sy Sarimiaina Malagasy (ISSM) na Centre Malagasy du Cinéma et de l’Image Animée. Ity ISSM ity izany no hasolo ny Office Malagasy du Cinéma et de l'Image Animée dénommé, «OMACI» izay nofoanan’ny fanjakana araka ny didy hitsivolana noraisina nandritra ny filankevitry ny minisitra tamin’ny 17 aprily 2019. Ny lalàna 2017-011 tamin’ny 26 jolay 2017 no nampisy ny OMACI. Niteraka resabe, nitondrana mpitandro ny filaminana ny tsy maintsy nanatanterahana ny famindram-pahefana ny 7 mey 2019 tao amin’ny foiben’ny OMACI Ambodifilao Antananarivo. Nitohy hatreny amin’ny Fitsarana ny fifandroritana. (Jereo Sary Tohiny)
mardi, 26 novembre 2019 13:27
Raharimanana Roger Venance nous a quitté le 19 novembre 2019, il avait 80 ans. Né le 31 août 1939, il est le fils de Ramanana Albert, traducteur du Gouverneur de Mandritsara, et de Rasoa Marguerite. La famille Raharimanana, sa femme et ses enfants, ses petits et arrière petits-enfants, toute sa famille à Mandritsara, Analalava, Ambilobe, Ambanja, Sainte Marie, Nosy Be, Ambovombe, Tolagnaro, Mampikony, Antsiranana, Port-Berger, Antananarivo, Ampahandralambo, Ambohidratrimo Anala, Mahajanga, Toamasina ; Sa famille qui vit à l’étranger, France, Etats-Unis, Seychelles, Comores, Mayotte, La Réunion, Italie, Espagne ;
Ora vitsy taorian’ny nisokafan’ny toeram-pisakafoanana voalohan’ny vondrona KFC etsy amin’ny Water Front Ambodivona-Antananarivo androany alatsinainy 18 novambra, dia nanao fanambarana tao amin’ny pejiny facebook i Randrianaivo Ambinintsoa Arson na Chef Mbinina, filoha mpanorina ny La Gastronomie Pizza. « Tongasoa KFC ! », hoy i Chef Mbinina. Nanome toky ireo mpanjifany i Chef Mbinina manoloana ny resabe miely, indrindra amin’ny tambazotra sosialy, milaza fa « ho faty amin’izay ny La Gastronomie Pizza ». « Marina fa bitika kely izahay fa tsy ho faty izany io, hihatsara aza. Hiatrika ady sarotra mihitsy no maha Chef ahy ! Aza matahotra », hoy hatrany i Chef Mbinina. (Jereo Sary Tohiny)